Kala beddelidda hadda iyo tooska tooska ah: kala duwanaanshaha iyo isku ekaanshaha | Qalab bilaash ah
Kala beddelidda hadda iyo tooska tooska ah: kala duwanaanshaha iyo isu ekaanshaha
Isaac | 28/09/2021 09:00 | waxbarashada, General
Waa in aad kala soocaan kala beddelidda hadda iyo ta tooska ah. Labaduba aad bay muhiim u yihiin, waxaana loo adeegsadaa xagga warshadaha iyo labadaba heer gudaha ah si loo xoojiyo qalab fara badan. Laga soo bilaabo mashiinnada warshadaha, ilaa qalabka guryaha, iyada oo loo marayo aaladaha mobilada, iyo kuwa kale walxaha elektarooniga ah.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale baran doontaa isku ekaanshaha, maadaama ay ka dhexeeyaan DC iyo AC, iyo sidoo kale sheeko xiiso leh iyo halgan u dhexeeya laba ikhtiraace oo aad caan u ah oo xitaa horseeday qaar ka mid ah waxshinimada si kor loogu qaado ...
1 Waa maxay durdurku?
2 Waa maxay tooska tooska ah?
2.1 Codsiyada iyo beddelidda
3 Waa maxay AC?
4 DC vs AC: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
4.1 Beddelidda AC / DC
Waa maxay durdurku?
Una hadda waa qulqul wax, ha ahaado durdur biyo ah, ama koronto. Marka laga hadlayo korontada, waxa run ahaantii dhacaya ayaa ah in uu jiro qulqul electrons ah oo dhex maraya gudaha kaariye, xitaa haddii aan la arkin.
Tani korantada Waxay noqon kartaa laba nooc aasaas ahaan ...
Waa maxay tooska tooska ah?
Sidaad horeba u ogaan doonto haddii aad si joogto ah u akhrido balooggan, DC, oo sidoo kale loo soo gaabiyo CC (ama DC af Ingiriis), waa mid hadda leh hal jiho. Taasi waa, qulqulka elektaroonigga wuxuu ku jiri doonaa jihada gaarka ah iyada oo loo marayo kaariye inta u dhaxaysa laba dhibcood oo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan iyo lacag koronto. Haddii aan garaafka ku muujinno garaafka, waxay u muuqan doontaa sidii xariijin joogto ah oo joogto ah.
Awooddan tooska ah ayaa la soo saaray markii ugu horreysay 1800, iyadoo ay ugu wacan tahay baytar uu abuuray fiisigis -yahanka Talyaaniga Alessandro Volta. Dabeecadda socodka hadda socda si fiican looma fahmin waqtigaas, laakiin waxay ahayd guul muhiim ah. Sannadkii 1870kii iyo bilawgii 1880kii, korontadani waxay bilaabatay in laga dhaliyo warshadaha korontada, si loogu shido shirkadaha iyo guryaha ka dib markii la alifay nalalka nalka. Thomas Edison.
Si loo difaaco nooca hadda jira, Edison wuxuu u yimid inuu sameeyo bandhigyo dhab ah oo aad u dantesque ah, isagoo isku dayaya sumcadda Nikola Tesla, isagoo ku andacoonaya in xilligan uu ka halis badan yahay. Si tan loo sameeyo, Edison wuxuu u yimid inuu sameeyo bannaanbaxyo dadweyne oo koronto ku qabta xayawaanno kala duwan. Horraantii 1903, kun qof ayaa goob joog u ahaa sida uu koronto u dilay una dilay maroodi 6600 volts. Si kastaba ha ahaatee, maroodiga ayaa horay loo quudin jiray karootada ku sumowday sunta siyan si loo hubiyo inay dhimatay. Dhammaan dhacdooyinkaas waxaa loogu yeeri jiray Dagaalkii hadda.
Codsiyada iyo beddelidda
Xilligan tooska ah waxaa si tartiib tartiib ah loogu beddelay mid kale oo hadda jira, kaas oo lahaa faa'iidooyinkiisa, sida aan arki doonno. Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda si weyn loogu adeegsadaa hawlgalka qaybaha elektiroonigga ah, sida qalabka maqalka, kombiyuutarada, iwm. Dhammaantood si ay uga shaqeeyaan shabakadda korantada ee beddelka ah, aaladaha hagaajiyaha ayaa loo adeegsadaa isbeddelka, sida adaporka ama sahayda korontada.
In kasta oo ku jira beddelidda hadda polarity Maaha mid asaasi ah, hadda tooska ah waa wax runtii aad muhiim u ah, waana in la ixtiraamo haddii wareegga la rabo inuu si habboon u shaqeeyo oo uusan burburin. Beddelidda polarity -ka DC waxay la micno noqon kartaa dhaawac aan laga soo kaban karin xaaladaha qaarkood, marka waa inaad tan ka taxaddartaa.
Taasi waa sababta ay caadi u tahay in la arko boosteejada ama fiilooyinka lagu calaamadeeyay tiirkooda u dhigma, ama midabada si loo kala saaro. Guud ahaan, guduudka waxaa loo adeegsadaa tiirka togan (+), madowna tabta (-). Qaar ka mid ah wareegyada DC ee kakan ayaa waliba ku dari kara midabbo dheeraad ah.
Waa maxay AC?
La talantaalli ah oo hadda socda, oo loo soo gaabiyo CA (ama AC oo Ingiriis ah), waa nooc ka mid ah korantada korontada oo baaxaddeeda iyo jihaynteedu ku kala duwan tahay wareeg ahaan, xilliyada. Taasi waa in la dhaho, si ka duwan CC, oo ahayd xariiq toosan oo lagu muujiyey garaaf, marka laga hadlayo beddelka waxaa lagu matalaa oscillation sinusoidal. Tirada wareegyada oo dhammaystiran halkii ilbiriqsi waxay ku xirnaan doontaa inta jeer ee wareegga. Tusaale ahaan, Yurub waxaan ku haysannaa 50 Hz, ama 50 jeer ilbidhiqsi kasta, halka Maraykanku ka shaqeeyo 60 Hz.
Waqtigan xaadirka ah wuxuu soo bixi doonaa 1832, markii Pixii uu abuuri lahaa beddelka koowaad, koronto -dhaliye, oo ku salaysan mabaadi’da Faraday. Markii dambe, Pixii wuxuu kaloo ku dari lahaa biiro si loo soo saaro tamar toos ah, oo aad looga isticmaali jiray waqtiyadii hore. Sannadkii 1855 waxaa la go'aamiyay in AC uu ka sarreeyo DC oo uu dhammaaday beddelkiisii.
Teknolojiyadda hadda jirta ayaa la beddelay lagu horumariyey Yurub, iyada oo ay ugu wacan tahay shaqada Guillaume Duchenne sanadihii 1850 -meeyadii. 1876 -kii, injineer Ruush ah ayaa sidoo kale abuuri lahaa nidaam nalal oo la mid ah kan Edison, laakiin leh koronto sare AC. Shirkadda Ganz Works ee Budapest waxay bilaabi doontaa inay soo saarto qalabka nalalka ku saleysan mabaadi'dan, marka lagu daro qalab kale oo ku saleysan hadda.
Injineerka iyo hal -abuurka Serbia Nikola Tesla, wuxuu ahaa mid ka mid ah difaacayaashii ugu waaweynaa ee xilligan ka soo horjeeda joogitaanka Edison. Wuxuu naqshadeeyay oo dhisay matoorkii induction ee ugu horreeyey ee beddela, kaas oo u beddeli kara tamarta korontada farsamo wareeg ah. Intaa waxaa dheer, xariifkan ayaa sidoo kale gacan ka geysan doona dhammaystirka nidaamyada qaybinta awoodda iyada oo aan isbeddel lagu samayn khadka.
Intaa waxaa dheer, Tesla wuxuu baaray aalad ay soo saareen injineero reer Yurub ah oo la yiraahdo isbadal. Waad ku mahadsan tahay, waxaa loo beddeli karaa danab hoose, oo markaa ka dhigaysa mid nabdoon guryaha, iyada oo aan loo baahnayn inay soo gaarto xaddiga lagu soo saaray, maadaama mid ka mid ah cabsida ugu weyni ay ahayd khatarteeda. Baaritaannadani waxay noqon doonaan bilowga wicitaanka Dagaalkii hadda.
Dhammaan shatiyada la xiriira Nikola Tesla's CA waxaa loo xilsaaray shirkadda Westinghouse Electric, si kor loogu qaado raasamaalka loona sii wado mashaariicda ku salaysan habkan. Intaas ka dib, gudbinta ugu horreysa ee isku -gudbinta CA ma qaadan doonto waqti dheer, oo dhici doonta 1891. Taasi waxay ka dhici doontaa Telluride (Colorado), dhowr bilood ka dib sidoo kale Yurub, laga bilaabo Lauffen ilaa Frankfurt (Jarmalka).
Markii AC ay guulaysatay oo ku baahday adduunka oo dhan, Thomas Edison wuxuu sii waday inuu u doodo tooska tooska ah, wax isaga ku kici kara booskiisa shirkadda. Edison koronto (oo hadda loo yaqaan General Electric), oo isaga laftiisu aasaasay ...
Kala beddelidda hadda ayaa la isticmaalaa warshadaha iyo guriga, waa midda ku safarta khadadka korontada si ay koronto u gaarsiiso dhammaan qaybaha adduunka. Waxay maamuli kartaa qalabka guriga, matoorrada, mashiinnada warshadaha, nidaamyada qaboojiyaha, iyo waxyaabo kaloo badan.
Sidaan hore u soo sheegay, markaad isku xidho a fiilada, waligaa ka taxadari maysid sida aad u dhigto maadaama ay u shaqayn doonto xaalad kasta. Tani waxay sabab u tahay mawjadda mawjadda mawjadda beddelka, maadaama ay beddeli doonto. Si kastaba ha noqotee, rakibaadaha caadiga ah, waxaa sidoo kale jira siyaabo lagu kala saaro fiilooyinka, iwm. Guud ahaan waxaad haysataa silig huruud / cagaar ah oo ah dhulka, silig buluug ah ama caddaan ah ayaa noqon doona dhexdhexaad, bunni ama madowna waxay noqon doontaa wejiga.
DC vs AC: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Labada durdurrood ayaa ilaa maanta si ballaaran loo adeegsadaa, sidii ay iyagu yeeleen faa iidadiisa iyo qasaarooyinkeeda. Tusaale ahaan:
Kala -beddelka hadda waa mid aad u fudud in la beddelo, wax aan ku dhicin hadda tooska ah.
Si aad u beddesho korantada, beddelka hadda waa inaad si fudud u isticmaashaa transformer, halka hadda tooska ah waxaad u baahan tahay inaad ku xirto dynamos ama koronto -dhaliyaha taxane, taas oo aan ahayn mid wax ku ool ah.
Beddelka hadda jira waxaa loo qaybin karaa masaafo aad u dheer oo leh xoogagga hadda jira, oo aad u yaraaday qaab kuleyl awgii saamaynta Joule iyo saamaynta kale sida durdurrada ama hysteresis. In kasta oo DC ay leedahay khasaare aad u weyn, ayna lagama maarmaan noqon doonto in la helo tiro badan oo ka mid ah warshadaha korontada oo u dhow meelaha loo baahan yahay.
Beddelidda AC / DC
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » waxbarashada » Kala beddelidda hadda iyo tooska tooska ah: kala duwanaanshaha iyo isu ekaanshaha
Isha laga leexday: maxay tahay, kala duwanaanshaha toosan, iyo waxa loogu talagalay
Hubinta transistor: talaabo talaabo lagu sharaxay